नेपाल आज | नोबेलमा सुनिल शर्माले दिएको शिक्षा बिद्यार्थीले उनिमाथि नै प्रयोग गरे !
नोबेलमा सुनिल शर्माले दिएको शिक्षा बिद्यार्थीले उनिमाथि नै प्रयोग गरे !
मोरङको विराटनगर–५, कञ्चनवारी स्थित नोबेल मेडिकल मेडिकल कलेजको एमबिबिएस पहिलो वर्षमा भर्ना भइसकेका ८० जना हाराहारी विद्यार्थीहरु ब्यवस्थापनको मनपरी विरुद्ध लामो समयदेखी आन्दोलनमा छन् ।
कलेजले ऐन–कानुन र मेडिकल काउन्सिलले तोकेको भन्दा झण्डै ५ लाख रुपैयाँ वढि शुल्क लिन खोजेपछि उनीहरु आन्दोलित भएका हुन । तर, ब्यवस्थापनले कुरै सुन्न तयार नभएपछि उनीहरु अहिले आक्रमण हुन थालेका छन् ।
कलेजका सञ्चालक सुनिल शर्माले सिकाएकै बाटोमा अहिले विद्यार्थीहरु लागेका छन् । ब्यवस्थापनलाई मनाउने नाममा अहिले उनीहरुले दुई पटक कलेजमा तोडफोड पनि गरे। जानकारहरुका अनुसार सुनिल शर्माले नोबेल मेडिकल कलेज गुण्डागर्दी शैलीमै हत्याएका थिए । वाईसिएलका कार्यकर्ता लगाएर कलेजका सञ्चालकहरुलाई अपहरण गरी कलेज हत्याएको उनीमाथि आरोप लाग्ने गरेको छ।
सुनिल शर्मा सामान्य पारिबारिक पृष्ठभुमि भएका मान्छे हुन। शर्माको पुख्र्यौली घर मोरङ्गको लेटाङ हो। लेटाङमा माध्यमिक तह पढ्दा राजेन्द्र न्यौपाने नाम गरेका उनी त्यहाँ एसएलसी फेल गरेपछि कालीकोट जिल्ला गए। उताबाट फेरि ९ कक्षादेखि अध्ययन गरेर एसएलसी प्रथम श्रेणीमा पास भएर फर्किदा उनी सुनिल शर्मा भएका थिए ।
नेपाल प्रहरीका अनुसार शर्माको आइएस्सी प्रमाण–पत्रमा पनि कैफियत छ। ०७३ सालमा प्रहरीले नक्कली प्रमाणपत्रधारी डाक्टर पक्राउ गर्ने अभियान चलाउँदा शर्मा फरार भएका थिए । त्यस वखत केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ‘अपरेसन क्वाक’ चलाएर धेरै नक्कली डाक्टरलाई पक्राउ गरेको थियो । वीरगञ्ज, जनकपुर, विराटनगरबाट डाक्टरहरू पक्राउ गर्दा शर्मा वेपत्ता भएका थिए । त्यतिबेला ब्युरोमा कार्यरत एक प्रहरी अधिकृतका अनुसार उनलाई खोजी गर्दा समेत फेला परेका थिएनन्।
नोबेल सञ्चालक हुनुपूर्व शर्मा चीनका विश्वविद्यालयमा नेपाली विद्यार्थी ओसार्ने दलाल हुन । विद्यार्थी ओसार्दैगर्दा उनले नक्कली आइएस्सी प्रमाणपत्रकै आधारमा त्यतैबाट एमबिबिएस प्रमाणपत्र लिएको प्रहरीको दावी छ। उनका निकटवर्तीहरु पनि शर्माको एमबिबिएस शैक्षिक प्रमाण पत्रमा आशंका गर्छन । राज्यका निकायहरूले पनि उनको योग्यताको प्रमाण पत्रमा शंका गरिरहेका वेला उनी फरार हुनुले पनि त्यो कुराको पुष्टि गर्ने श्रोतको दावी छ ।
शर्माले स्वास्थ्य शिक्षाका नाममा पुर्वका सर्वसाधारण लुटिरहेको श्रोतको दावी छ। कोरोनाको समयमा नोवेलले उपचारका नाममा सर्वसाधारणसँग अनावश्यक रकम असुल गरेको बताईन्छ। माहामारीको मौका र सर्वसाधारणको विश्वासको फाईदा उठाउँदै नोवेलले जथाभावी पैसा उठाउने र गलत उपचार गर्ने गरेको थियो ।
विरामी अस्पतालमा भर्ना हुनासाथ हाइफ्लो अक्सिजनमा राख्ने, कोरोना पुष्टि भईसकेपछि पनि अनावश्यक रुपमा विभिन्न प्रकारका महङ्गा टेस्टहरु गराउने, कडा खालको एण्डिवाईटिक चलाउने तर स्वास्थ्यकर्मीले विरामीको हेरचाह नगर्ने, रुम र शौचालय सफा नगर्ने, उपचारका लागि स्वास्थ्यकर्मीलाई पिपिईसमेत किनेर दिनु पर्ने अवस्था थियो।
बिरामीलाई गलत उपचार गरेर सिरियस बनाएको र सामान्य अबस्थाको बिरामिलाई पनि गम्भिर अवस्था देखाएर मनोबैज्ञानिक रुपमा आफन्तलाई टर्चर दिने गरेको थियो। विरामीसँग दशौं लाख लुटिसकेपछि अन्यत्र रेफर गर्ने तर उपचारका क्रममा प्रयोग गरिएको औषधीको रकेर्ड समेत नदिई पठाउने गरिएको विरामी र आन्तले नै आरोप लगाउने गरेका छन् ।
नोबेल कलेजका सञ्चालक सुनिल शर्मालाई मन्त्रालयमै कालोमोसो
सुनिल शर्मा नोबेल मेडिकल मेडिकल